Ciat 2020 တွင်ပြသထားသော Fiat Concept Centoventi! | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလောကအမေရိကန်1 အမေရိကတိုက်Ciat 2020 တွင်ပြသထားသော Fiat Concept Centoventi!
10 / 01 / 2020 1 အမေရိကတိုက်, အမေရိကန်, လောက, PHOTOS, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, မော်တော်ယာဉ်
Consumer Electronics Show - CES 2020 တွင် Fiat သည်ဆန်းသစ်ပြီးခေတ်မီသောလျှပ်စစ်သဘောတရား Fiat Concept Centoventi ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ Las Vegas တွင်ကျင်းပသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစားသုံးသူအီလက်ထရွန်နစ်ကုန်စည်ပြပွဲတွင် CES 2020 ၌အထူးအာရုံစိုက်မှုကိုခံယူခဲ့သော Centoventi görenကားအယူအဆသည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ကိုထူးခြားစွာဖြေရှင်းရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ Concept Centoventi ကို Fiat ၏ ၁၂၀ နှစ်အတွက်အထူးတီထွင်ခဲ့ပြီး ၈၉ ကြိမ်မြောက်ဂျီနီဗာမော်တော်ပြပွဲတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်း၏မော်ဂျူလာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Fiat သည် Concept Centoventi ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Las Vegas ရှိ CES 2020 ပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သည်။ Centoventi သည် Red Dot ၏ဒီဇိုင်းဆုရ Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ၏အယူအဆဖြစ်ပြီးလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအမှတ်တံဆိပ်သည်လျှပ်စစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အမှတ်အသားကိုထင်ဟပ်စေသည်။ its ည့်သည်များ၏ modular တည်ဆောက်ပုံနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထူးခြားချက်များဖြင့်ဆွဲဆောင်သည်။ Centoventi ဟူသောဝေါဟာရမှ၎င်း၏အမည်ကိုအီတလီဘာသာဖြင့် yusz တစ်ရာနှစ်ဆယ် Ada ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီးစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးမှုတွင်အကန့်အသတ်မရှိသောအတွေ့အကြုံများကိုကမ်းလှမ်းပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀ မှနောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်။
“ Centoventi နှင့်အတူ“ မိတ်ကပ်” သည်အသုံးအနှုန်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်”
CES 2020 တွင်ပြသခြင်းနှင့်အတူမြောက်အမေရိကစျေးကွက်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့သည့် Fiat Concept Centoventi သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲသုံးစွဲသူ၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အ ၀ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုကိုရိုးရှင်းစေရန်ကားကိုတစ်မျိုးတည်းနှင့်အရောင်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ '4U' ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ အဆုံးအသုံးပြုသူသည်ကားကိုကွဲပြားသောအိမ်ခေါင်မိုး ၄ မျိုး၊ ဘိုင်ပါ ၄ ခု၊ အချင်းဘိုင် ၄ ခုနှင့်အပြင်ဘက်တိန့် ၄ ခုတို့ဖြင့်ကားကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခေတ်မီကိရိယာများကဲ့သို့ကားများ၊ အပြင်ပန်းအရောင်များ၊ အတွင်းပိုင်းဗိသုကာ၊ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောနှင့်ထပ်ဆောင်းမျက်နှာကျက်ဖွဲ့စည်းမှုတို့ဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အရောင်းဆိုင်စနစ်သည်လုံးဝထူးခြားစွာတည်ဆောက်ထားခြင်းခံရသည်။ Fiat Centoventi သည်ဗားရှင်းအသစ်၊ အထူးစီးရီးသို့မဟုတ်မိတ်ကပ်ကဲ့သို့သောအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုစောင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ တောင်းခံလျှင်အသုံးပြုသူသည်အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကားကိုအချိန်မရွေးအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ Fiat Centoventi ၏အကွာအဝေးသည် modular ဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်သောဘက်ထရီတည်ဆောက်ပုံကြောင့်ကား၏အကွာအဝေးမှာ ၁၀၀ မှ ၅၀၀ ကီလိုမီတာအထိရှိသည်။
Concept Centoventi သည်လျှပ်စစ်ဖြေရှင်းချက်များသို့ကူးပြောင်းနေသည့်မော်တော်ယာဉ်လောကသို့ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကိုယူဆောင်လာသည်။ ၁၉၅၀ တွင် Fiat သည်မော်ဒယ် ၅၀၀ ဖြင့်စက်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို ဦး ဆောင်ခဲ့စဉ်ကတော်လှန်ရေးဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်များဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းကို tailgate တွင်တပ်ဆင်ထားသောခေတ်မီပြထားသောလူမှုမီဒီယာကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းကာမော်တော်ယာဉ်ကဏ္ sector ၏နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကားမျှဝေခြင်းနှင့်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းအသစ်များကိုစိတ်တွင် ထား၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောအယူအဆသည်ကားရှေ့ခန်းရှေ့မျက်နှာပြင်တွင်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဖော်ပြချက်သည် 'အပြည့်၊ အချည်းနှီးသို့မဟုတ်လခပေးသောကားရပ်နားခြင်း' ကဲ့သို့သောသတင်းစကားများကိုထင်ဟပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် tailgate ပေါ်ရှိမျက်နှာပြင်ကြီးသည်အသုံးပြုသူအားမိမိ၏သတင်းစကားကိုပြင်ပကမ္ဘာနှင့်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယာဉ်ရွေ့လျားနေစဉ် Fiat အမှတ်အသားကိုသာပြသသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရပ်ပြီးနောက်ယာဉ်မောင်းသည်မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်“ messenger” စနစ်သို့ပြောင်းနိုင်သည်။
Bault Concept ကို Inc က
signal Concept ကို GmbH သည်
လက်ရှိမီးစက်တင်ဒါ၏ MT 55000 type ကို Fiat Mototreni
5700 အမျိုးအစား Fiat (ဓာတ်ပုံပြခန်း) mototrains
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Fiat ယူနစ် Iveco Motors ကသိမ်းယူခံရဖို့ပိုင်ဆိုင်အင်ဂျင်ပစ္စည်းများအတွက်
Renault ကအုပ်စု, Fiat-Chrysler မော်တော်ကားများဟောငျး၏ Bid အကဲဖြတ်
ကို CES 2020